DUGSIGAAGA | LIFE Prep School
2021-2022 Qorshooyinka dhicista
Baadhista Sahanka Xiisaha ee Pod
Foomka Heshiiska Farsamada
Jadwalka taariikhda dugsiga
Himilada &amp; Hadafka
La kulan Shaqaalaheena
Casharrada fiidiyaha ee loogu talagalay Barashada Fogaanta
Kusoo dhawow Life Prep
Iskuulka 'Life Prep', waxaan u aragnaa nafteena inaan nahay qoys, kaas oo ardayda oo dhami ay muhiim noo tahay. Magacayagu wuxuu ku wada dhacey, RAADADA Nolol waxay u taagan tahay barashada deegaanka bey'ada.
Qiimaheena asaasiga ahi waa "LOVE, LEARN, ACHIEVE, GUUL." Qiimayaashani waxay naga caawinayaan bixinta jawiga jacaylka iyo dhiirrigelinta ee ardaydeenu u baahan tahay inay ku guuleystaan ​​waxbarashadooda. Waxaan ardayda oo dhan uga doodnaa inay u koraan sidii bartayaal oo ay filayaan waxa ugu fiican.
Guusha waxbarashadu waa udub dhexaadka dugsiga 'Prep School'. Arday kasta waxaa hagi doona Qorshooyinka Barashada Shakhsiyeed, oo loogu talagalay in lagu dhiso awoodaha iyo taageeridda aagagga barashada. Qorsha kasta waxaa lagu abuuraa ardaygaaga maanka iyada oo ay kujirto cusboonaysiinta horumarka sanadka oo dhan.
Iskuulka Life Prep, waxaan ognahay sida iskudhafka farshaxanka, muusikada iyo dhaqdhaqaaqa maalintani u abuurto arday sifiican u diyaarsan oo hogaamiyayaal ah. Ardaydu waxay ka qaybgalaan fanka ama muusikada iyo jimicsiga maalin kasta! Tilmaanta farshaxanka iyo dhaqdhaqaaqa waxay caruurta ka caawineysaa hormarinta xirfadaha luqadaha, xirfadaha bulshada, go'aan gaarista, hal abuurka iyo isku xirnaanta bulshada iyo dhaqanka.
Ma ku hawlan tahay fasalka muusikada! Muusiggu wuxuu keenaa kalsoonida ardayda markay bartaan inay ciyaaraan aaladda muusikada oo ay u shaqeeyaan koox ahaan, kordhinta isku xirnaanta bulshada!
Dhaqdhaqaaqa waxbarashada jir-dhiska maalin kasta waxay ku guuleysataa waxqabad tacliimeed oo xoog leh iyo kordhinta caafimaadka.
DUGSIYADA DUGSIYADA NOLOSHA waxay ku faanaysaa dhaqankeena adag ee kala duwanaanta iyo iskugeynta. Ardayda oo dhami waxay helayaan "hoy" soo dhoweyn leh, badbaado leh barashada iyo horumarinta xiriir waara